Warshad Aluminium Aluminium, Alaab-qeybiyeyaal - Shiinaha Soosaarayaasha Sheet Aluminium
1 aluminium taxane ah
3 Taxanaha Aluminium Sheet
5 Xaashida Aluminiumka Taxanaha ah
6 Xaashida Aluminiumka Taxanaha ah
Xaashida Aluminiumka Taxanaha ah
Aerospace iyo duulista hawada
6061 Aluminium Sheet & Saxan
Dheemanka aluminium ee lagu dubay sanduuqa qalabka
sheet daawaha aluminium
Imtixaan T Hot Featured Imaatinka cusub alaabada jaban Best
7050 XAASHKA ALUMINUM
7050 aluminium waa daawaha-kuleylka lagu daweeyo kuleylka, oo leh caabbinta daxalka oo ka sarreeya 7075 aluminium. iyo adkeyn fiican. Waxay leedahay dareen hoose oo ah daminta
7075 XAASHKA ALUMINUM
7075 saxan aluminium waxaa iska leh Al-Zn-Mg-Cu super aluminium adag, taas oo ah awood sare, qabow daran oo shaqeynaya oo been abuur ah, oo aad uga fiican birta khafiifka ah.
6061 XAASHKA ALUMINUM
6061 xaashi aluminium ah waa shey tayo sare leh oo daawa ah oo ay soo saaraan daaweynta kuleylka iyo horey u sawirida Mg iyo Si, oo leh qalab aad u fiican, dheellitirnaanta iyo guryaha wax lagu dhejiyo, iska caabbinta daxalka wanaagsan iyo adkaanta sare.
6063 T6 XAASHKA ALUMINUM
6063 aluminium daawaha ah ee aluminiumku waa Al-Mg-Si daawaha balaastigga ah ee sarreeya, oo leh sifooyin wax soo saar aad u fiican, alxamid aad u fiican, xoqitaan iyo dahaadh, caabbinta daxalka wanaagsan, adkaanta, fududahay in la nadiifiyo, dahaadhka, saameynta oksaydhka anodic waa mid aad u fiican, waa daawaha caadiga ah ee soo-saarka.
6082 XAASHKA ALUMINUM
6082 aluminium aluminium waa saxan aluminium ah oo aluminium ah oo ka mid ah 6 taxane aluminium aluminium ah (Al-Mg-Si), oo leh qaab wanaagsan iyo hawlgal fudud, waxqabadka anodic wanaagsan, dabool fudud, caabbinta daxalka wanaagsan iyo iska caabinta qiiqa.
5A05 XAASHKA ALUMINUM
Xaashida aluminiumka 5A05 waa aluminium miridh ah oo daxal gala taxanaha aluminium-magnesium, astaamaha ugu waaweyn ee ay yihiin cufnaanta hoose, xoogga siligga sare iyo dheereynta sare. Isla aaggaas, culeyska aluminium-magnesium-ka wuxuu ka hooseeyaa taxanaha kale.
Maxay yihiin codsiyada kala duwan ee di ...
Sida loo arko miridhku sabaynta caadiga ah iyo ...
Sidee loo nadiifiyaa aluminiumka qurxinta ...
Cinwaanka: Koonfurta Wenzhou Avenue, Xuzhou Industrial Park, Gobolka Jiangsu Shiinaha
Alaab-qeybiyeyaasha Birta ah ee Anodized Aluminium, qiimaha aluminium jeeg jeeg, Waraaqaha Aluminium ee jaban, daawaha aluminium 6061 qiimaha, Tread Tread Aluminum Aluminium, 7050 sheet aluminium,